Ikhaya ukuwafaka: Salad "Vegetable Ingadi", iresiphi for the ebusika
Imifino kuvuna kusukela umhlaba wangasese, kubonakale njalo ukunambitha esitolo kangcono noma Larkova. Phela, wazi kahle indlela yokusondelana inhlabathi futhi yini umquba yokuqothulwa. Wena imifino nje ngeke bame izinhlobonhlobo abonakala sengathi okungcono, kahle uvuthwe ezimweni yakho sezulu kanye nezidingo zakho acid, ubumnandi, nokucija, nokunye. D. Futhi ngakho, yebo, bafuna alondoloze sokuvuna bese qinisa isagcine okuzenzela.
"Garden" ngaphansi hood
Indlela kufanele ibe zakudala "ingadi" isaladi? Indlela ebusika inikeza ezihlukahlukene ongakhetha - konke kuncike kulokho ncamashi izitshalo ewusizo yatshalwa sakhula. Ngokwesibonelo, uma unayo zucchini, utamatisi, u-anyanisi, izaqathe, ukhukhamba, iklabishi, garlic, konke iyona ohlonipheka kakhulu indlela uzhivotsya kwelinye ibhange. Yiqiniso, kufanele zonke izingxenye agcinwe endaweni ezintathu-litre jar - Thenga okwengeziwe! Isibalo sabo mahhala, uma ngokungazelelwe ezinye izingxenye phezu - akunandaba. Salad "Garden", iresiphi for the ebusika, ivumela ukuba ziyahlukahluka izithako kwengoma. Ngakho, uma wenza futhi amakhabe ke qhubeka bese efakwa izimbiza ambalwa tincetu ikhabe. Bookmark kwenziwa kanje: phansi isitsha ukulungele ukubeka 5-6 uphizi allspice, futhi isiqeshana pod ka oyingozi. Engeza i-umbrella dill, amacembe horseradish, blackcurrant kanye cherry. Khona-ke, amaqatha ambalwa iklabishi, ukhukhamba amancane, tincetu noma imibuthano zucchini lisikiwe noma Ugalonci, utamatisi eqinile ezincane, izaqathe lokunyenti, ngabe tinkomishi. I last tincetu egcinwe ikhabe - asiboshiwe yinyama ngayinyomfoza ngayiphosa ngaphansi nezinye imifino. Mboza phezulu konke lokhu ubukhazikhazi omunye dill isambulela kanye umfire ambalwa ehamba. Plus phakathi imifino nendawo phezu ambalwa clove sikagalikhi. Manje marinade "ingadi" isaladi. Indlela Yokuthola imifino ebusika ezifana Kunconywa yokugcwalisa Ukwakheka ngokuba bonke amalitha elilodwa nohhafu wamanzi ezibekwe ku 4 wezipuni ushukela (canteens) 2 usawoti kanye nengxenye uviniga itiye inkomishi (cishe ngo-125 g).
Ukuze ngokuphelele Akungabazeki kungenzeka "bombazhnosti" yinto okusemathinini ukuba ubudala indlela usuphelelwe: ukubeké ngaphansi lid 2 ezejwayelekile ithebhulethi aspirin (acetylsalicylic acid itholakala ikhemisi ngamunye). Nokho, ushukela Kulokhu, uma ufuna, ukubeka "okungalé" spoon. Sterilizable ngaleyo ndlela "Garden" isaladi: iresiphi for ebusika litusa 'ubilise kahle "amabhange isigamu sehora kusukela kuqale a okugeza amanzi abilayo egcwele. Khona-ke kufanele ngokushesha Roll up, Pheqa, ikhava bese ushiye kuphole. Usuku ukuthumela lonke ezenziwe ekhaya.
Nge imibhede emabhange
Enye kumnandi ukuba isaladi, "Garden", kanje. Embizeni ezintathu-litre ibekwe phansi garlic, izinongo, amakhambi, ngokucophelela dill (bheka. Recipe ngenhla). Khona 2-3 izaqathe naphakathi (Chop imibuthano), 2 amakota inhloko elincane iklabishi, amaqatha ambalwa zucchini, ukhukhamba lonke notamatisi (okungcono "cream") - njengoba zizongena, onion, uthathe nezixhobo ezinkulu, futhi isigamu usule imbewu pepper. Mboza nge dill (ngoba iphunga) futhi usengakwazi chesnochinu. Thela lokhu ubuhle udinga amanzi ashisayo, ake ume imizuzu 15. Khona-ke uthele epanini, ubilise futhi uthele phezu imifino futhi. Nalapha ushiye imizuzu 15 cwenga futhi. Khona-ke epanini uthele ingilazi uviniga (egcwele, uma 6%, kanye ¾ uma 9%), inkomishi ushukela, 3-4 wezipuni usawoti bese ushiye ukubilisa futhi. Uma, ngemva kwalokhu ukwelashwa ukushisa, izikhukhula ngelulela osebeni isaladi "ingadi" (iresiphi ngesithombe unamathisele) marinade abilayo ke abakwazi inzalo. Amabhange flip, bopha futhi ushiye kuphole.
Indlela enhle bevula ebusika, angithi?
Salad Austria - obucayi isimangaliso Culinary
Izimbaza isaladi ne zokupheka okumnandi kakhulu, zokupheka indlela kanye nokubuyekeza
Coleslaw nge izaqathi. isaladi Simple nge iklabishi
Classic isaladi egqinsiwe nge inkukhu kwesibindi kanye ukhukhamba zicwiliswe
Salad iresiphi yenza i
Krutikov Anatoliy Fedorovich: Biography ngezithombe
Kungani baphupha isambulela? encwadini iphupho ukutolika
Revolutionary UGrigory Petrovsky: Biography, izimpumelelo, imiklomelo kanye namaqiniso kumnandi
Chernogolovka (esifundeni eMoscow): izimpawu zendawo Isayensi City nasezindaweni ezizungezile
Tale "Ngesibindi kuyachwaza Fly" - isithelo ugqozi imbongi sika
Magnesium sulfate: isicelo, izimbali Umanyolo
Negesi kubhayela "Danko" kusukela "Agroresurs" inkampani
Nokwenziwa kwezinto eziphilayo - ukuthi kuyini lokhu? Izibonelo nokwenziwa kanye dissimilation ngokwemvelo
Iresiphi Tested: mackerel anosawoti ekhaya
Iresiphi elula: inkukhu webele eyodla
Izilawuli zomzali ku "Android": Uhlelo ukubuyekeza